XUKUUMADA RIYAALE OO FAASAXDAY QAYB KA MID AH XAAFADDA INDIAN LINE KA EE BADHTAMAHA HARGEYSA | Toggaherer's Weblog
GURYAHA LA IIBIYEY EE INDIAN LINE KA
Xukuumadda Madaxweyne Riyaale ayaa la sheegay inay Qayb ka mid ah xaafadda India-line-ka ee badhtamaha magaalada Hargaysa ka faasaxday dad ganacsato ajnabi ah.
Dadka shicibka ah ee degan xaafadda India-line-ka ayaa xukuumaddu ku amartay in ay si dhakhso ah uga guuraan guryaha dawladda, waxaana la sheegay in qaar ka mid ah dadkii xaafaddaasi deggan oo u badnaa dad danyar ah iyo qoysas ka mid ah agoomihii iyo mujaahidiintii SNM ay durba ka guureen guryihii ay deganayeen, kadib markii Dawladda hoose iyo Wasaaradda Hawlaha guud ay ku amreen in ay si dhakhso ah uga guuraan guryaha dawladda.
Qaar ka mid ah dadka degan guryaha dawladda ee xaafadda India-line-ka oo ka cudurdaartay in magacyadooda la sheego ayaa noo xaqiijiyay in xukuumaddu dad ganacsato ah ka iibisay dhamaan xaafadda India-line-ka.
Warar xogogaal ah oo arrintaasi ku saabsan ayaa sheegay in xukuumaddu waxoogaa lacag ah oo ay ku guuraan ugu talo gashay qoysaska degan guryaha dawladda ee India-line-ka.
Guryaha Indian Line-ka loo yaqaanno oo la dhisay wakhtigii Somaliland ahayd Maxmiyadda Boqortooyada Ingiriiska, waxa loogu talagalay inay degaan shaqaalaha dowladda, gaar ahaan, shaqaalaha wasaaradaha. Waxayna ku fadhiyaan dhul aad u ballaadhan oo ku yaal badhtamaha faras-magaalaha Hargeysa.
Inkasta oo aan la sheegin qiimaha ay xukuumadda siisay qaybta xaafadda Indian-Line-ka, haddana waxa la rumaysan yihiin inay lacag badan oo malaayiin dollar ku iibisay dhulkan, taas oo ka mid noqon doonta hantida faraha badan ee ku jeebadaha leexsan.
Maaha markii ugu horaysay ee xukuumaddu sifo sharci darro ah ay ku iibiso guryaha dawladda iyo dhulka danta guud ah ee waxa ay hore xukuumaddu u faasaxday guryo badan iyo dhul dan-guud ah oo ku yaala magaalooyinka Hargaysa, Burco, Berbera iyo xitaa Laascaanood oo hadda uun maamulka Somaliland gaadhay, kuwaasi oo dhaliyay muran iyo iska hor imaadyo gaystay khasaare.
Waxa kale oo ay xukuumaddu dhowaan isku dayday inay iibiso Line-ka Booliska oo ah xaafad yar oo ku taalla badhtamaha magaalada oo ay ka dhisan yihiin Guryo dawladdu leedahay oo loogu talagalay xaasaska Booliska. Hase yeeshee, waxa iibkaas la joojiyey kadib markii saxaafaddu ogaatey, isla markaana wax laga qoray.